पैसा जम्मा नगरेको भन्दै चिकित्सकले हेरेनन् ! डाक्टरकै अगाडी गयो महिलाको प्राण (भिडियो) – Jagaran Nepal
पैसा जम्मा नगरेको भन्दै चिकित्सकले हेरेनन् ! डाक्टरकै अगाडी गयो महिलाको प्राण (भिडियो)
काठमाडौं । घरमा वेहोस भएकी एक महिलालाई उपचारका लागि सुरुमा नया बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पताल लियो । सिभिल अस्पतालले त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने भन्दै शिक्षण अस्पताल लैजान सुझाव दियो।
अस्पतालको सुझाव अनुसार महिलालाई शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालमा चिकित्सकले सामान्य चेकजाँच पछि महिलाको मुटुको शल्यकृ’या गर्नुपर्ने र त्यसका लागि डेढ लाख रुपैया लाग्ने बताए।
अस्पतालले सुरुमा पैसा जम्मा गर्नुस अनि हामी आइसियुमा विरामी लैजान्छौं, पैसा नआउँदा सम्म विरामी उठाउन मिल्दैन भनेर भने पछि विरामीका आफन्तले विरामीलाई आइसियुमा लैजादै गर्नु हामी पैसाको ब्यवस्था गछौं भन्दा अस्पतालले मानेन।
विरामीको आफन्त नन्दले विरामी लिएर आउँदा हामीले पैसा लिएर आएका हुँदैनौ उपचार सुरु गर्नु हामी पैसा लिएर आउँछौ भन्दा चिकित्सकले नमानेको बताइन् । उनले आफुहरुलाई बाहिर बस्नुस् भन्दै विरामीलाई एक छेउमा राखेर चिकित्सकहरु बैठकमा बसेको महिलाको आरोप छ।
चिकित्सकले शल्यकृ’या गरे पछि विरामी निको हुने ग्यारेन्टि दिएका थिए । तर पैसा जम्मा नगरेका कारण उपचार नगरेकै कारण विरामीको निधन भएको भन्दै आफन्तहरु अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । वि’रामीको आफन्तले चिकित्सकहरुले विरामीको निधन भएपछि वार्ता गर्न आउनु भन्दै बोलाएको बताएका छन्।
काउन्टरवाट ५० हजार भन्दा बढीको औ’ष’धि किन्न लगाएर पनि विरामीलाई आइसियुमा नलगेको आफन्तको भनाई छ । सुगर र प्रेसरको विरामी रहेकी महिला विहान वेहोस भएपछि आफन्तले अस्पताल ल्याएका थिए।